Abasakazi bachitha izinsolo zokudlwengula
UDJ Fresh oshicilele isitaimende echitha izinsolo zokudlwengula
Intatheli yezokungcebeleka | September 10, 2019
IZINTANDOKAZI zabasakazi uDJ Fresh kanye noDJ Speedsta seziphumele obala ziphika izinsolo zokudlwengula njengoba amagama azo edalulwe namanye osaziwayo abasolwa ngokugila lomkhuba wokuzenzela kubantu besifazane.
Izindaba zokuhlukunyezwa, ukubulawa kanye nokudlwengulwa kwabantu besifazane nezingane zibe sematheni ngesonto eledlule njengoba emakhasini ezokuxhumana kusabalaliswe amagama abantu besilisa abasendimeni kaqedisizungu, ikakhulukazi emculweni abathintekayo emacaleni okudlwengula. Izisulu zokudlwengulwa bezineka onke amahlazo mayelana nokuzibandakanya ocansini nabantu besilisa ngaphandle kwemvume.
UFresh, ongumsakazi we-947 FM, uphike izinsolo zokudlwengula ezibhekiswe kuye kwivideo ayenze ekhasini lakhe laTwitter. UFresh uthe kunezinsolo ezinzima kakhulu ezibhekiswe kuye ezinkundleni zokuxhumana kodwa uzozilungisa ngoMsombuluko noma ngoLwesibili. Lomsakazi uveze ukuthi unenjwa kabi ngumuntu ayethandana naye kudala futhi lezi zinsolo sezineminyaka engu-18 zikhona. UFresh ugcizelele ukuthi ubesethule isikhathi eside kodwa useqome ukuziphendulela.
UDJ Speedsta, ongumsakazi weMetro FM ophinde ashayele uhlelo lweLive Amp olukhonjiswa kuSABC 1 njalo ngoLwesihlanu ebusuku, uziqhelelanisile nalezi zinsolo njengoba egcizelele ukuthi usebenzisana nabantu besifazane abamthemba ngezimpilo zabo. USpeedsta uveze ukuthi uzokhuluma nommeli wakhe ukuze ezovulela icala laba abambheca ngalezi zinsolo.
“Ngizwile ukuthi igama lami libalwe kubantu abasolwa ngokudlwengula nokunukubeza ngokocansi ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi kuTwitter njengoba kuqhubeka imikhankaso elwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Angihambisani nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane futhi ngingenza noma yini esemandleni ukuze ngihlanganyele ekulwisaneni nodlame olubhekiswe kwabesifazane,” kuchaza uSpeedsta.